Home Wararka MW Uganda oo magacaabay MW ku xigeen iyo Ra’iisul Wasaare cusub
MW Uganda oo magacaabay MW ku xigeen iyo Ra’iisul Wasaare cusub
Madaxweyne Museveni ayaa Uganda Yuweri Museveni ayaa magacaabay golihiisa wasiirada isagoo madaxweyne ku xigeenkiisa iyo ra’iisul wasaaraha dalka ka dhigey dumar. Madaxweyne ku xigeenka Uganda ayaa loo magacaabay Jessica Alupo halka ra’iisul wasaare loogu magacaabay Robinah Nabajja.
Haweeneyda loo magacaabay Madaxweyne ku xigeenka ayaa ka mid ahayd saraakiisha ciidamada dalka Uganda iyadoo xilal kala duwan ka soo qabatay dalkeeda. Alupo waa siyaasi, sarkaal hore oo militariga iyo aqoonyahan ku dhashay 1974 degmada Katakwi. Dhinaca kale ra’iisul wasaaraha cusub ee dalka Uganda Robinah Nabajja ayaa waxaa ay hore u soo noqtay Wasiiru dowlaha wasaarada caafimaadka dalka Uganda.
Previous articleAl Shabaab oo saraakiil Kenyaan ah ku dilay gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida
Next articleAl Shabaab oo dad rayid ah ka afduubay Degaano ka tirsan Gobolka Bay
Maxaa iska badalay kulankii Ankara ee Sabdiga loo balansanaa?
Sargaal goor-dhaw lagu toogtay Degmada Waaberi